Obere mmepe na nnukwu ụlọ ọrụ Apicmo cdmo Manufacturers
anyị Ọrụ > Obere ọnụahịa & nnukwu nhazi
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị dị na North America, Europe, Aisa, tinyere Pfizer, Lilly, Rock, GSK, MSD, bayer na ụlọ ọrụ ndị ọzọ a ma ama.
A na-eduzi ọrụ niile anyị na-eme na omenala na ọnọdụ nzuzo. Anyị na-akwado ìgwè ọrụ nkwado anyị dị iche iche nke otu ọkachamara nwere ahụmahụ na nke raara onwe ya nye nke ndị na-aṅụ ọgwụ. Na-arụ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ na mpaghara okpomọkụ dị na -100˚C ruo 300˚C, na nhacha sitere na 5L ruo 5000L, a na-enye ndị ahịa site na ntinye aka na-arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ mmemme dị mkpa (ruo ọtụtụ ton metric) ma na-arụ ọrụ ihe na-emepụta ọgwụ. A na-arụpụta ihe n'ime ụlọ ọrụ anyị.
Anyị na-ahazi sistemụ ahụ maka ịmepụta onwu iji zọpụta ihe mgbapụta gị nke ọma na ezigbo ọsọ na ọnụahịa mgbe ị na-agbaso usoro kachasị elu nke usoro nchekwa na usoro iwu. Usoro nhazi kachasị mma maka nhazi nhazi dị iche iche na mma ngwaahịa. A na-eme usoro niile iji dozie ụkpụrụ usoro iwu.